मेगा बैंकको सीइओमा अनुपमा खुन्जेली नियुक्त, नेपालमा पहिलोपटक कमर्सियल बैंकमा महिला नेतृत्व !
ARCHIVE, CORPORATE MOVEMENT, SPECIAL » मेगा बैंकको सीइओमा अनुपमा खुन्जेली नियुक्त, नेपालमा पहिलोपटक कमर्सियल बैंकमा महिला नेतृत्व !
काठमाडौँ- अनुपमा खुँजेली वाणिज्य बैंकहरुमध्ये नेपालको पहिलो महिला सीइओ भएकी छिन् । व्यवस्थापनले कार्यकाल नथपेपछि अनिल शाहले बैंक छाडेपछि उनी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएकी थिइन् । अन्तत: उनलाई नै सीइओको जिम्मा बैंकले दिएको छ ।
तत्कालिन नेपाल ग्रिन्डलेज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैक) बाट करियर सुरु गरेकी उनी त्यसपछि नबिल गएकी थिइन् । नबिलपछी उनी मेगा आएकी हुन् । खुँजेली व्यवस्थापकीय पाटोमा निकै अब्बल मानिन्छिन् । बोर्डले उनलाई ४ बर्षका लागि नियुक्त गरेको हो ।